KNU ရှေ့တန်းစစ်သားတွေ က ငါးသေတ္တာဆီပြန် မအလစစ်သားတွေ က ငှက်ပျောအူ ဘာကွာလဲ သိလား – Maythadin
KNU ရှေ့တန်းစစ်သားတွေ က ငါးသေတ္တာဆီပြန် မအလစစ်သားတွေ က ငှက်ပျောအူ ဘာကွာလဲ သိလား
May Thadin | May 24, 2021 | News | No Comments
KNU စစ်သားတွေရဲ့ရှေ့တန်းထမင်းဝိုင်းက ငါးသေတ္တာဆီပြန်နဲ့ မားမားအရည်သောက်
ဟိုစစ်ခွေးတွေက ငှက်ပျောအူကိုက်နေရတာကို ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ ငနွားတွေသိဖို့
ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိရင် ဘယ်အရာမှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး ပြည်သူတာလျှင်အဓိက အမေစုအမြဲပြောတဲ့စကား တရေးနိုးထစဉ်းစားရင်တောင် အချိန်ပြည့်မှန်တယ်။
KNU စ့စ့်သားများ လာလို့ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် တင်မကဘူး မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလေးစားတယ်
အိမ်ရှေ့ကနေ KNU စစ်ကြောင်းဖြတ်သန်းသွားရင်လင်ယောက်ကျာ်း စားဖို့ချက်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းပါ ထည့်ပြီးအပြေးလွှား သွားပေးကြတာ ကရင်ပြည်သူတွေက။
ထမင်းစားနေရင် ကရင်စစ်ကြောင်းလာလို့ကတော့ စားနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းကထပြီး စစ်သည်တော်တွေကို ခေါ်ကျွေးတာ ကရင်စစ်သားတွေမှာက စည်းကမ်းအလွန်ကြီးတာ ပြည်သူ့အိမ်ထဲ
ထမင်းဝင်စားခွင့်မရှိဘူး ဘာမှယူဆောင်ခွင့်မရှိဘူး အိမ်ရှင်က လိုလိုလားလားဖိတ်ရင်တောင် ဝင်စားခွင့်မရှိဘူး အဲကျတော့ စားနေတဲ့ ထမင်းဟင်း အိုး ခွက် ထဲထည့်အပြေးလွှား သွားပေးကြတာပေါ့။
မိ…အောင်လှိုင်ရဲ့ မု့ဒိန့်းစ့စ့်သား သူ့ခို့းစစ်သား လာလို့ကတော့ ဝေးဝေးကမြင်ရုံနဲ့ ပြည်သူတွေမှာ သူခိုး၊ဓားမြ၊မကောင်းဆိုးဝါမိစ္ဆာကောင်တွေ လာသလိုပဲ ကြောက်လန့်တကြားပြေးကြ
ရှိသမျှ ပစ္စည်းပြေးဝှက်ကြ ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊နွား၊ကျွဲ ရှိသမျှ အကောင်အကုန် ခြံထဲမောင်းသွင်းကြနဲ့ ဒါတောင် အိမ်ရှေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ခွေး ခိုးသွားသေးတာ။ သမီးမိန်းကလေး
ရှိလို့ကတော့ အိမ်ရှေ့ပေးမထိုင်ရဲဘူး ၅၀ ၆၀ အဒေါ်ကြီးအရွယ်မကျန် ပြေးပုန်းကြတာ စောက်ကျင့်တွေကို သိနေတာလေ။ဒါများစ့စ့်ခွေး အဘတွေရဲ အိမ်မွေးခြံပေါက် ငယ်ကျွန်တွေက ပြောသေးတယ်…….
မင်းတို့…. ငါတို့လို ငှက်ပျောအူ စားနိုင်လားတဲ့ မစားနိုင်ပါဘူး လူတွေဆို လူလိုကျွေးမှာပေါ့ မင်းတို့က……….။အ ​ြကမ်းဖ့က့်စ့စ့်သူ့ပု့န်လူ့သ့တ့်မိစ္ဆာ့ကောင်တွေ အာကာထွန်းဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ငှက်ပျောအူ မစားနိုင်ရင် ကြူကြူလှ စ့ပ့ လှီ့းဖြတ်ယူသွားကြပေါ့။
KNU စစ္သားေတြရဲ႕ေရွ႕တန္းထမင္းဝိုင္းက ငါးေသတၱာဆီျပန္နဲ႕ မားမားအရည္ေသာက္
ဟိုစစ္ေခြးေတြက ငွက္ေပ်ာအူကိုက္ေနရတာကို ဂုဏ္ယူေနၾကတဲ့ ငႏြားေတြသိဖို႔
ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈမရွိရင္ ဘယ္အရာမွ မေအာင္ျမင္နိုင္ဘူး ျပည္သူတာလွ်င္အဓိက အေမစုအၿမဲေျပာတဲ့စကား တေရးနိုးထစဥ္းစားရင္ေတာင္ အခ်ိန္ျပည့္မွန္တယ္။
KNU စ့စ့္သားမ်ား လာလို႔ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ တင္မကဘူး ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းေလးစားတယ္
အိမ္ေရွ႕ကေန KNU စစ္ေၾကာင္းျဖတ္သန္းသြားရင္လင္ေယာက္က်ာ္း စားဖို႔ခ်က္ထားတဲ့ ထမင္းဟင္းပါ ထည့္ၿပီးအေျပးလႊား သြားေပးၾကတာ ကရင္ျပည္သူေတြက။
ထမင္းစားေနရင္ ကရင္စစ္ေၾကာင္းလာလို႔ကေတာ့ စားေနတဲ့ထမင္းဝိုင္းကထၿပီး စစ္သည္ေတာ္ေတြကို ေခၚေကြၽးတာ ကရင္စစ္သားေတြမွာက စည္းကမ္းအလြန္ႀကီးတာ ျပည္သူ႕အိမ္ထဲ
ထမင္းဝင္စားခြင့္မရွိဘူး ဘာမွယူေဆာင္ခြင့္မရွိဘူး အိမ္ရွင္က လိုလိုလားလားဖိတ္ရင္ေတာင္ ဝင္စားခြင့္မရွိဘူး အဲက်ေတာ့ စားေနတဲ့ ထမင္းဟင္း အိုး ခြက္ ထဲထည့္အေျပးလႊား သြားေပးၾကတာေပါ့။
မိ…ေအာင္လွိုင္ရဲ႕ မု႔ဒိန့္းစ့စ့္သား သူ႕ခို႔းစစ္သား လာလို႔ကေတာ့ ေဝးေဝးကျမင္႐ုံနဲ႕ ျပည္သူေတြမွာ သူခိုး၊ဓားျမ၊မေကာင္းဆိုးဝါမိစာၦေကာင္ေတြ လာသလိုပဲ ေၾကာက္လန့္တၾကားေျပးၾက
ရွိသမွ် ပစၥည္းေျပးဝွက္ၾက ၾကက္၊ဝက္၊ဘဲ၊ႏြား၊ကြၽဲ ရွိသမွ် အေကာင္အကုန္ ၿခံထဲေမာင္းသြင္းၾကနဲ႕ ဒါေတာင္ အိမ္ေရွ႕က်န္ခဲ့တဲ့ေခြး ခိုးသြားေသးတာ။ သမီးမိန္းကေလး
ရွိလို႔ကေတာ့ အိမ္ေရွ႕ေပးမထိုင္ရဲဘူး ၅၀ ၆၀ အေဒၚႀကီးအ႐ြယ္မက်န္ ေျပးပုန္းၾကတာ ေစာက္က်င့္ေတြကို သိေနတာေလ။ဒါမ်ားစ့စ့္ေခြး အဘေတြရဲ အိမ္ေမြးၿခံေပါက္ ငယ္ကြၽန္ေတြက ေျပာေသးတယ္…….
မင္းတို႔…. ငါတို႔လို ငွက္ေပ်ာအူ စားနိုင္လားတဲ့ မစားနိုင္ပါဘူး လူေတြဆို လူလိုေကြၽးမွာေပါ့ မင္းတို႔က……….။အ ​ၾကမ္းဖ့က့္စ့စ့္သူ႕ပု႔န္လူ႕သ့တ့္မိစာၦ႔ေကာင္ေတြ အာကာထြန္းေဘာင္းဘီဝတ္ၿပီး ငွက္ေပ်ာအူ မစားနိုင္ရင္ ၾကဴၾကဴလွ စ့ပ့ လွီ့းျဖတ္ယူသြားၾကေပါ့။
အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့စာကိုဖတ်ပြီး မငြင်းရက်တော့လို့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရင်ထိုးလေးကို စျေးတင်ရောင်းချသွားမယ့် ပန်ဆယ်လို
၆ ရက်တောင်ရှိနေပြီ ထမင်းမစားရဘဲ ဆန်ပြုတ်ဘဲသောက်နေရတဲ့ သနားစရာမိသားစုလေး